AmaBasotho ajabulela ingoma nomdanso, okuhambisana nemikhosi eminingi nemisebenzi yomphakathi. Ingoma iphinde isetshenziselwe ukuveza okuhlangenwe nakho kwabantu abangekho isikhathi eside njengabasebenzi abahamba emakhaya: amadoda ancintisana ukuze akhulume ngempilo ye-litsamaea ezweni (izingoma zabahambi) mayelana nokuhlangenwe nakho kwabo emahostela ami nasezindaweni zangaphansi, futhi abesifazane basebenzisa indlela efanayo yokuphindaphinda ukulila uhlala njengabafelokazi botshani. Imidanso ejwayelekile kakhulu yi-mokorotlo, i-mohobelo kanye ne-mokhibo.
I-mokorotlo yenziwa ngamadoda ngenduna ngezikhathi ezibalulekile, njengemihlangano yezombusazwe, noma lapho inhloko nabalandeli bakhe behamba ukuvakashelwa. Iqukethe ukujikeleza kwesigqi emuva futhi phambili, kuhlangene nokuhamba kancane okuhamba kancane; umholi uhlabelela ngezwi eliphakeme elilandelwayo elilandelwa yi-throaty ejulile yeqa eqenjini.
Ngezikhathi ezithile, omunye wamadoda aphuka eqenjini futhi akhuphuke futhi akhonze phambi kwenhloko, elingisa ukuhlaselwa kwempi. Uhlolwe ngabanye abayeka ukuhlabelela bese bembiza ngegama lakhe lokudansa. Angase azifundele ngokwakhe noma izindumiso zezinduna. Ubuye abuyele esimweni sakhe futhi ukunyakaza kokudansa okuhamba kancane kuqhubeka. I-mohobelo, eyenziwa amadoda, idinga amandla nokukhuthazela futhi idansa kakhulu kusihlwa, ngokuzijabulisa nokuzijabulisa.
I-Mokhibo ngumdanso womama owenziwe emadolweni, umzimba uvuka kahle futhi uwele njengoba izandla zikhuphuka phezulu. I-choir engakahleleki imele ngemuva komdanso wokudansa, ukucula nokushaya. I-maqekha ingumdanso okhethekile oyingxenye yemihlangano yokuqala yokuqala kwamantombazane.
I-Basotho inezinsimbi ezihlukahlukene zomculo. I-morupa, isigubhu esincane esisetshenziselwa ukuqala kwamantombazane, senziwe ebhodini lobumba lapho isikhumba somthunzi sibhekene khona, futhi sishaywe ngezandla eziphansi. I-lekoko yenziwe ngomqulu wesikhumba senkomo onzima oshaywe ngezinduku, okhiqiza umsindo othuthumela.
Ukusetshenziswa kwalo kuvinjelwe cishe ngokuphelele kuma-maqekha seances. I-lesiba iqukethe izinwele zehhashi ezibekwe eceleni kwenduku phakathi kwe-quill ne-bracket ephethe. Ukukhanya okukhanyayo ngokumelene ne-quill kubangela ukuba izinwele zehhashi zidlidliza, zikhiqize umsindo ohlabayo ovame ukuhambisana nezwi lomdlali.
I-thomo iqukethe umnsalo, ngaphesheya lapho izinwele zehhashi noma intambo encane ifakwe, futhi ehlanjululwa ngocingo olugxilwe phakathi. Umnsalo uhlanganiswe ne-calabash (noma, ezikhathini zamuva, i-old tin tin) esebenza njenge-resonator. Insimbi idlalwa ngokuxhuma ucingo noma ukuyikhetha ngenduku.